Avy amin’ny blaogy Ejiptiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2018 12:32 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2005)
Asongadin'i Ritzy ilay fanambarana adaladala hoe nampangain'ny fitsaràna izy noho ny ”fiteny kivalavalan'ny feony sy ny fahitàna ety ivelany ny volom-pilahiany” .
Manasongadina ny adalàna ao amin'ilay ampahany ”volom-pilahiana” i Sandmonkey ary milaza fa tokony ho fafazan”-tsika” baomba i Arabia Saodita.
Tohizan'ireo blaogera Ejiptiana ny miresaka mikasika ireo zava-mitranga ao Alexandria .
Mitatitra (teny Arabo) i MalcolmiX fa nizara fialantsiny tamin'ny olona teny an-dàlana noho ny nanaovana ilay lalao an-dampihazo ilay fiangonana tomponandraikitra tamin'izany.
Mikarakara fiaretan-tory eo alohan'ny Bazilika any Heliopolis i Karim. Raha toa ka mikarakara (teny Arabo) hetsika kosa mba hanohanana ny firaisankina nasionaly i Kefaya. Mikarakara andro iray hifadian'ny Miozolomana sy ny Kristianina hanina i Africano (teny Arabo) sy ny vondrona blaogera iray.
Mitatitra i Tarek (teny Arabo) fa tohizan'ny Azhar ny fanakanana boky. Boky iray atontan'ny Oniversite Amerikana ao amin'ny Gazety Cairo sy ny Gazetin'ny Oniversiten'i Oxford. Boky mitondra ny lohateny hoe: Ny Fivavahana Silamo Wahhabi avy amin'ny Fanavaozan-kery mankany amin'ny Fifohazana ary mandalo amin'ny Jihad Maneran-tany izay nosoratan'i Natana DeLong-Bas.
Mamoaka lahatsoratra (teny Arabo) lava be mikasika ny famoriambahoaka momba ny fifidianana hitany avy teo amin'ny lavarangan'ny tranony i Mohammed . Mihevitra izy fa tery dia tery ny valim-pifidianana eo amin'ny firahalahiana Miozolomana sy ny NDP . Tsy nisy na iray aza famoriambahoaka momba ny fifidianana hitany ho nahasarika azy hidina sy handray anjara teny an-dalana.
Milaza i Fustat fa nahomby ilay sarimiaina Simpsons nadika tamin'ny teny Arabo ary mbola hahomby izany aorian'ny Ramadan.
Faly amin'ny fanombohana ny BBC sy ny Fahitalavitra Arabo amin'ny 2007 ny Freedom for Egyptians (FfE). Milaza izy fa hanampy fomba fijery vaovao izany. Asongadin'i Fustat fa tohanan'ny mpiaramiombona antoka iray goavana avy any Etazonia ao Iraka ara-bola ny BBC. Fa ampahatsiahivin'ny FfE ny haavon'ny fahaizan'ny BBCWorld TV sy ny tolotra Onjam-peo amin'ny teny Arabo.